Gbasara anyị - Linsu Environmental Protection Material Co., Ltd.
"Giqiu" ala bụ nke ika Linyi Linsu gburugburu ebe obibi-echebe ihe Co., Ltd. ụlọ ọrụ specializes na nnyocha na mmepe, mmepụta, ahịa na ọrụ nke otu àgwà uzo plastic n'ala usoro ngwaahịa. Ọ nwere ụlọ akwụkwọ nyocha, ụlọ nyocha, ụlọ ọrụ mmepụta ihe, yana sistemu nchọpụta kacha mma.
Dabere na nkà ihe ọmụma azụmahịa nke "mma, ika na ọrụ", ụlọ ọrụ ahụ na-edu ndú na sayensị na teknụzụ ma na-eme ihe ọgụgụ isi nwere ọgụgụ isi; mepụta ụlọ ọrụ kachasị elu na ndị otu mmepe, na-etolite ma na-agbanwe usoro okooko osisi; ụzọ abụọ na-eduga n'usoro mmepụta nke otu agba nwere ikike mmepụta kwa ụbọchị nke 240000 square mita. , a guzo ngwaahịa nke 600000 square mita, 18 ngwaahịa usoro na ihe karịrị 400 iche iche na agba, izute dị iche iche mkpa, ọgwụ na ahụ ike, e ducation, njem, egwuregwu, ngosi slọ Nzukọ Alaeze wdg
The ụlọ ọrụ mechaa 3C asambodo, ISO9001 quality management usoro asambodo, TUV Rhine na Germany na-omimi nnyocha osisi. All anyị ngwaahịa mechaa SGS mba ọkọlọtọ ule, gụnyere eyi na-eguzogide ọgwụ, antiskid, ire ọkụ-retardant, na-abụghị o-benzene, formaldehyde wdg ụlọ ọrụ na ngwaahịa na ya magburu onwe ya mma, magburu onwe arụmọrụ na zuru okè mgbe-sales ọrụ usoro e ọtụtụ ebe ghọtara. ma ndị ahịa n'ụlọ na mba ofesi tụkwasịrị obi.
Ndị ọrụ injinia anyị ruru eru ga-adị njikere ijere gị ozi maka nyocha na nzaghachi. Anyị na-enwe ike ịnapụta gị yana nnwere onwe n'efu iji gboo mkpa gị. Enwere ike ime mgbalị kachasị mma iji nye gị ezigbo ọrụ na ngwaahịa. Maka onye ọ bụla nwere mmasị na ụlọ ọrụ anyị na ihe ndị ọzọ, biko kpọtụrụ anyị site na iziga anyị ozi-e ma ọ bụ kpọtụrụ anyị ozugbo. Iji mata azịza na nhazi anyị. ọzọ, ị nwere ike ịbịa ụlọ ọrụ anyị iji chọpụta ya. Anyị na-anabata ndị ọbịa si mba ụwa niile na ụlọ ọrụ anyị.